Burmese taste - Iora: မြန်ကောင်းသက်သာ ငါးအိုးကင်းပူတို်က် နဲ့ ထမင်းနယ်
Posted by Iora at 11:28 PM
စူးနွယ်လေး July 1, 2011 at 11:40 PM
ငါးတော့အရမ်းကြိုက်တယ်။ တို့လည်းလေ တခါတလေ ညဗိုက်ဆာရင်ငါးတတုံးကို အဲလိုလုပ်ပြီးထမင်းမပါပဲ စားတတ်တယ် :)
Iora July 1, 2011 at 11:50 PM
ဘာလို့ ဒီလောက် အကြိုက်တွေတူနေကြပါလိမ့်နော်။း)
Anonymous July 2, 2011 at 12:54 AM
ခုသူများတွေအလှည့်ပီးဘီ...တို့တွေအလှည့်ရောက်ပီ...ဒန် တန့် ဒန်... (ဒါမဲ့ ရှမ်းထမင်းချဉ်အရမ်းကြိုက်တော့ ထမင်းနယ်နဲ့ ငါးဟင်းကို သွားရည်ကျသွားတယ်)
Baby taster July 2, 2011 at 4:30 AM
ခုေ၇ာ သက်သာပြီလား သဖုံးယောင်တာ
ဗိုက်ဆာလိုက်တာနော် ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း
ကော်ဖီ ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ကြိုက်တယ် သိလား
ဒါပေမဲ့ အခါးသက်သက်ပဲ ခရင်မ်နဲ့ အချိုမထည့်ဘူး
ရွှေညာသားလေး July 2, 2011 at 6:57 AM
ရွှေညာသားလေး...ပုံတွေကြည့်ပြီး သွားရည်ကျသွားတယ်။ ဗိုက်တွေဆာနေတုန်းရောက်လာလို့ စိတ်ကူးနဲ့ ကုန်အောင်စားလိုက်တယ်နော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 3, 2011 at 10:02 AM
တစ်ခါမှ ငါးကို အဲလိုလုပ်မစားဖူးဘူး .. ဆီလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ် ပြီးတော့ကြည့်ရတာနဲ့တင် စားချင်စရာဖြစ်စေတယ် အရောင်လည်းလှတယ် ။ ကော်ဖီကြိုက်တာချင်းတော့ တူတယ် အဲလို ခရင်မ်များများနဲ့ သောက်ရတာ သဘောကျတယ်
I love fish too!!! Coffee with whipped cream? I could say I live for it.
Iora July 3, 2011 at 6:36 PM
ဂျေဂျေ့ အလှည့် က သဘာဝ အကြောင်းလား။
ငါးထမင်းချဉ်အစားထိုးပေါ့။ ငါးကို အဲလိုလုပ်လိုက်တော့ ပြုတ်တာ နွှင်တာ ပန်းကန်ဆေးရတာတွေလည်းသက်သာပြီး ငါးကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင် စားရတော့ ခရမ်းချဉ်သီးမပါတာကလွဲ လို့ သဘောတရားတော့ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။း)
ခုတော့သက်သာသွားပါပြီ။ သတိတရ မေးလို့ ကျေးဇူးနော်။
ကော်ဖီကို သကြားမထဲ့ဘဲသောက်တာ ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးပါ။
ကုိုယ်ကတော့ တခါတလေမှမထဲ့တာ။ ပြင်းပြင်းစိမ့်စိမ့်သောက်ချင်တဲ့အခါမျိုးပေါ့။ အဲဒီကော်ဖီတုန်းက ပြင်းပြင်းစိမ့်စိမ့် သောက်ချင်တော့ သကြားကုို ပါလေကာဘဲထင်ပြီး နုို့ မှုန့် နဲ့ ခရင်မ်ကုို များများထဲ့ထားတာပါ။
စားပါ။ စားပါ။ ပုံနဲ့ ဘဲကြွေးနေရတာတောင် အားနာပါတယ်။
လုပ်မစားဘူးသေးရင်တော့ ရက်ကောမန်းဒ် လုပ်ပါတယ်။ လုပ်စားနော်။ ကြိုက်မှာသေချာတယ်။ ရုိုးရုိုးငါးကြော်က ဆီပေါက်မှာကြောက်ရတယ်။ ကြွတ်အောင်ကြော်ရတော့ အချိန်ပိုကြာတယ်။ ဆီပိုသုံးရတယ်။ ငါးကြော်နံ့ ကမွှေးပေမဲ့ ဒီကအခန်းတွေမှာ fan ဖွင့်လည်း ညှော်နံ့ ကအကြာကြီးစွဲကျန်နေတယ်။ ငါးကြော်ပျော့သွားရင် စားလုို့ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ သူကအစကတည်း ကအပေါ်ယံလေးတင်းပြီး ခပ်အိအိလေးလုပ်ထားတာဆိုတော့ ပျော့မှာလည်းမပူရဘူး..(ညွှန်းနေတာ ညွှန်းနေတာ လုပ်စားဖြစ်အောင်လို့း) )
ကော်ဖီလည်း အကြိုက်တူတယ်။ အင်း..အကြိုက်တူတွေစုနေတယ်နော်။
ငါးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ တော်သေးတာပေါ့။ ၀က်သားတို့ ငါးတို့ တင်ရင် မစားတဲ့သူတို့ မကြိုက်တဲ့သူတို့ တော့ အားနာစရာလို့ အမြဲတွေးမိတယ်။
ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်။ whipped cream ထဲ့ထားတာ။
ကျေးဇူးဘဲ မွန်ရေ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ။
Nyi Linn Thit July 4, 2011 at 3:09 AM
ဒီတခါတော့ ပန်းကန်မှာ ကပ်နေတဲ့ အကြွင်းအကျန်လေးပဲ ကြည့်ပြီး ပြန်သွား ပါတယ်ဗျာ..၊း) ပြန်ခါနီး ကော်ဖီခွက်နဲ့ ဘောပင်ရဲ့ ဆက်စပ်ပုံကို ခေါင်းကုတ် သွားသေးတယ်...။း)
Iora July 4, 2011 at 9:12 AM
နောက်လည်းကျသေး တွေးစရာကလည်းပါသွားသေးဆိုတော့ သိပ်မနိတ်ဘူးပေါ့နော်။ field သမားဆိုတော့ အတိုင်းအတာမှန်းနုိုင်အောင် ဘောပင်တို့ ပေတံတို့ ထဲ့ထဲ့ရိုက်ရတယ်လေ။
ကော်ဖီခွက်ကြီးအားမနာတမ်းသောက်ရအောင် ဘေးမှာရှိနေတော့ထဲ့ရုိုက်ထားတာပါ။ ဒီလိုတွေးလည်း ရသေးတယ်။ ကော်ဖီသောက်ရင်း အကြွေးစာရင်းမှတ် အဲလေ ဈေးစာရင်းမှတ်တယ်။ စာရေးတယ်ပေါ့။
မြစ်ကျိုးအင်း July 5, 2011 at 10:39 AM
စားချင်စရာလေးပါဗျာ။ အစားအသောက်ကို အနုပညာဆန်ဆန် ဖန်တီးထားတာ တော်ရုံစိတ်ရှည်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်သာဆို တီးဖို့ပဲ အာရုံရမှာ။း)
Iora July 5, 2011 at 11:27 AM
ကျမကလေလူကရုပ်ဆိုးသလောက်အလှအပကိုကြိုက်ပြီး ခံစားတတ်တယ်။း) အနုပညာဆန်တာကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။ လှတပတပြင်ထားတဲ့ အစားအသောက်ကိုလည်း မျက်စိနဲ့ ပါစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သိပ်စိတ်ရှည်တဲ့ထဲမှာတော့မပါပါဘူ။ သူများအတွက်တော့စိတ်ရှည်တတ်ပါတယ်။ သူများအကြိုက်ကိုလည်းလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကလည်းကုိုမြစ်ကျိုးအင်းလိုဘဲ တီးဖို့ ဘဲ။ ပူတာကလည်းကြိုက်တော့ ပြင်နေလို့ အေးသွားရင် သိပ်မကြိုက်တော့ဘူး။:)
ကောင်းမွန်ဝင်း July 11, 2011 at 8:58 PM
ငါးအိုးကင်းနဲ့ ထမင်းနယ်က အပြင်အဆင်က နိုင်ငံတကာစံချိန်ဝင်တယ်။ ငါးထမင်းနယ် ကော အာလူးထမင်းနယ်ကောကြိုက်တယ်။
ကျွန်မလေ သိလား အခု သံပုရာသီးဝယ်ပြီး သံပုရာရည်ဖျော်သောက်နေတတ်ပြီ။
ဘယ်သူ့ ဆီက ဓါတ်ကူးသွားပါလိမ့် နော်။
ကုိုယ်ကမြှောက်မှန်းသိလည်း ၀မ်းသာတယ်နော်။း)
ဒီကဖျော်ရတာပျင်းလို့ အမြဲမဖျော်ဖြစ်ဘူး။ အမြဲတော့ ၀ယ်သောက်တယ်။ တခါတခါကျရင်တော့ သေသေချာချာဖျော်သောက်တယ်။
စန္ဒကူး July 17, 2011 at 5:45 PM
စမ်းကြည့်ရမှာပ.. အစားသောက်ဆိုလက်မနှေးဘူး.း)
Iora July 18, 2011 at 12:56 AM
မအားတဲ့နေ့ တွေဆုိုဒါလေးကမဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမပါတာတခုပါဘဲ။
စမ်းကြည့်။ စမ်းကြည့် ကူးကူးကြိုက်မှာသေချာတယ်။
သက်ဝေ August 12, 2011 at 1:22 AM
ကျမကလေ လူကရုပ်ဆိုးသလောက် အလှအပကိုကြိုက်ပြီး ခံစားတတ်တယ် တဲ့... (ယုံပါဘူး...)
ကော်ဖီခွက်ကြီးတော့ သိပ်ကြိုက်သွားဘီ... Cream တော့ မထည့်ချင်ဘူး... ဝနေလို့... ဟီးဟီး
သက်ဝေ August 12, 2011 at 1:23 AM
ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ ယုံဘူးလို့ ပြောတာနော်....း))))))
Iora August 12, 2011 at 6:37 PM
ရော်...ဒါဆုို မြန်မာပြည်က မိုးလေ၀သသတင်းလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။ မသက်ဝေခန့် မှန်းတာ လွဲသွားမှာပေါ့။း) ဒီကပြောတာ ယုံ။
ကော်ဖီခွက်ကြီးကတော့ အိမ်မှာနေရတဲ့နေ့ ဆို အိပ်ယာထတာနဲ့ ဖျော်ပြီးသားဘဲ။ ခရင်မ် ကတကယ်တော့ မကြိုက်တတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့တခါတခါ မကြိုက်တာတွေကို သူများစားနေတာမြင်လာရင်တို့ ဈေးကြီးပေးစားလုိုက်ရတာတို့ ဆိုအိမ်မှာပြန်
ပြန်စမ်းသပ်တတ်တယ်။ ၀နေမှ သိပ်မကြိုက်တဲ့ဟာကို စမ်းသပ်ပြီးစားနေသေးတယ်။ ဂွစာ။ Idiot. (ကိုယ့်ကုိုကိုယ်ပြောတာနော်။)